के हो निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोग ? यसका प्रमुख ५ कारण - Daily Lokmandu
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैलीके हो निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोग ? यसका प्रमुख ५ कारण
के हो निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोग ? यसका प्रमुख ५ कारण
August 11, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on के हो निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोग ? यसका प्रमुख ५ कारण
विख्यात अमेरिकी फिल्म शृंखला ‘स्टार वार्स’की अभिनेत्री क्यारी फिसरको निधनको मुख्य कारण ‘स्लिप एप्निया’ रहेको चिकित्सकहरूले पुष्टि गरेका छन्।
स्लिप एप्नियाका कारणले मस्तिष्कमा अक्सिजनको कमी हुन्छ र मस्तिष्कले हामीलाई गहिरो निद्राबाट ब्युँझाइदिन्छ। कतिपल्ट त हाम्रो निद्रा पूरै खुल्छ भने कतिपल्ट अर्धनिद्रामा हुन्छौं, तर यी सबै हामीले ख्यालै गर्दैनौं।
हामी आफैंले थाहा पाउन कठिन हुने भएकाले यो समस्या आफूसँग सुत्ने अर्को मानिसले थाहा पाउन सक्छ। निद्रामा घुर्नु, निदाएका बेला विभिन्न खालको आवाजसहित सास फेर्नु, सास फेर्न निकै कठिन हुनु र निदाएका बेला बारम्बार स्याँ स्याँ गर्नु वा सास रोकिनु यसका प्रारम्भिक लक्षण हुन् ।
निदाएका बेला घाँटीका मांसपेशी र सफ्ट टिस्युज खुम्चिएर आउनु सामान्य हो र यस्तो सबैलाई हुनसक्छ। तर यसले सबैलाई समस्या उत्पन्न गर्दैन । जसलाई यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ, त्यसका निम्न कारण हुन सक्छन्:
१‍. मोटोपन: धेरै मोटो हुँदा घाँटीमा सफ्ट टिस्युज पनि धेरै हुन्छन् । त्यसैले सफ्ट टिस्युज शिथिल हुनासाथ सासनली नै बन्द हुन्छ। पेटमा धेरै बोसो वा ठूलो पेट भएका मानिसलाई पनि स्लिप एप्निया हुनसक्छ।
दाईजो नल्याएपछि सासुससुरा मिलेर बुहारीलाई बेचे !
Exclusive: राजेश हमाल, माग्ने र धुर्मुसको जम्का भेट अनि…